Owase-Sweetwaters nama-battery azosiza umphakathi | News24
LAST UPDATED: 2018-12-12, 08:25
Owase-Sweetwaters nama-battery azosiza umphakathi
ISITHOMBE: sithunyelweElinye lama-battery enziwe uMnu Andile Hlongwa nokwazi ukuthi uwasebenzise iminyaka emibili engapheli.
OWESILISA wase-Sweetwaters usesungule uhlobo lwama-battery olusha naluchaza njengoluzosiza umphakathi ukuthi ungaloku uthenga njalo ama-battery.
UMnu Andile Hlongwa (31) nosebenza kwabezimo eziphuthumayo uthe kumthathe iminyaka emibili egcwele ukuthi aze abe nesiqiniseko sokuthi lolu hlobo olusha lwama-battery lusebenze. Uthe lo mcabango wamufikela ezihlalele, wacabanga ukuthi yini angayenza engaletha ushintsho emphakathini ehlukile.
“Ngingumuntu othandayo vele ukusebenzisa izandla zami ukwenza izinto kodwa bengiqala ukuthi ngenze into efana nalena. Lokhu ngikuthatha njengesiphiwo kanti futhi ngizimisele ukuqhubeka ngisisebenzise. Lolu hlobo lwama-battery olusha ngilwenze ngendlela yokuthi kube yinto ozokwazi ukuyisebenzisa ingunaphakade ungaloku ushintsha njalo ama-battery. Uyalishaja njengoba usuke wenza kumakhalekhukhwini wakho kanti lizokuthatha iminyaka emibili yonke ngaphambi kokuthi liphele.
“Iphupho lami ukuthi le nto engiyenzile igcine iphasisiwe ngoba ngiyakholelwa ekutheni ingasiza abantu abaningi. La ma-battery uyakwazi ngisho ukuwasebenzisa kumathoyizi ezingane. Ekhaya nje sesisebenzisa elinye lala ma-battery ukucisha kanye nokuvula umabonakude,” kubeka yena.
Uqhube wathi uzimisele ngokwenza noma yini ukufezekisa iphupho lakhe kangangokuba ufuna ukuya nasenkampanini yakwa-DSTV ngenhloso yokuyikhombisa asekwenzile.
“Lokhu kusayisiqalo kuningi engifuna ukukwenza ngoba futhi sengibonile ukuthi nginekhono. Ngiyakholelwa ukuthi izinto eziningi engizozenza zizoshintsha izimpilo zabantu ukuthi zibe ngcono kakhulu nokuyinhloso yami vele
“Zikhona izinkampani esengizihambelile ngizikhombisa ngalokhu esengikwenzile kanti ziwujabulele kakhulu umsebenzi wami,” ephetha.
Khayelitsha 08:37 AM